Kingdom: Legendary War – Variety Myanmar
Watch full episodes Kingdom: Legendary War, download Kingdom: Legendary War english subbed, Kingdom: Legendary War eng sub, download Kingdom: Legendary War eng sub, stream Kingdom: Legendary War at Variety Myanmar.
Status: Ongoing Released: 01 Apr 2021 Duration: N/A Country: South Korea Type: Drama Director: N/A Casts: Ateez, Chang-min Shim, The Boyz, Yunho Jung Posted by: Thomas Nicolas Released on: April 4, 2021 Updated on: June 6, 2021
Watch streaming Kingdom: Legendary War English Subbed on Variety Myanmar. You can also download free Kingdom: Legendary War Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Kingdom: Legendary War on Variety Myanmar MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.
အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Kpop လောကရဲ့ အမိုက်စား
Survival Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kingdom ကြီးလာပါပြီ။
ယောက်ျားလေးအိုင်ဒေါအဖွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ The Boyz, Stray Kids, Ateez, iKON, BTOB နဲ့ SF9 တိုက
ဒီတစ်ခေါက် Season မှာထူးခြားတာကတော့ elimination round
လုံးဝလုံးဝ ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘဲ အဖွဲဝင် ၆ ယောက်စလုံးက Final Round ထိယှဉ်ပြိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Winner ဖြစ်ဖိုအခွင့်အရေးဟာ fan တွေဆီမှာ 50% ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစပေါ် 50% မူတည်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲရဲ့ detail ကိုမသိသေးတာကြောင့် ဘယ်လိုတွေပြိုင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကတော့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး အပါတ်စဥ် ကြာသတေး နေ့တိုင်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်းအနေနဲ့ ၆ ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး
CP အနေနဲ့ ဘတ်ချန်ဝု ၊ PD အီယောင်ဂျူး ၊ MC (စီစဉ်တင်ဆက်သူ) အနေနဲ့
TVXQ အဖွဲဝင် ချန်မင်း တိုကပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hnin Pale, Htike Aung Winn နဲ့ Phone Htet Kyaw တိုဖြစ်ပါတယ်။
Translators : Hnin Pale, Htike Aung Winn & Phone Htet Kyaw
Air Date : 1.4.2021
Video Source : 720p-NEXT
Resolution : 720pHD
Kingdom: Legendary War Ep3
Kingdom: Legendary War Ep2